मठ Leyre को | यात्रा समाचार
मठ Leyre को
यस हप्ता हामी एरागान र नाभ्रा, येसिया रिजर्भोयर बीचको आकर्षणको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यस गन्तव्यको पर्यटक आकर्षणहरू मध्ये हामी नाम राख्छौं Leyre मठ, तर आज हामी उहाँमा मात्र केन्द्रित छौं।
तिमीलाई मन पर्र्यो मध्यकालीन भवनहरू? को ग्रेगोरियन मन्त्र, शायद? के तपाईं स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर जलाशयको अभूतपूर्व दृश्यहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए, हाम्रो दिनको पोष्ट ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।
1 मठ Leyre को
2 Leyre को मठ भ्रमण गर्नुहोस्
यो स्पेनिश गुम्बा बीचको महत्त्वपूर्ण मठ हो, यसको इतिहास र यसको सुन्दर वास्तुकलाको लागि। यो प्याम्लोनाबाट 52२ किलोमिटर टाढा छ र यो क्यामिनो डे स्यान्टियागोको मार्गमा छ जुन हजारौं तीर्थयात्रीहरू हरेक वर्ष गर्छन्।
यो हो सिएरा डे Leyre मा निर्मित, सियरा डे एरान्डो पनि भनिन्छ, पिरेनीस पहाडहरू, एरागान नदीको उपत्यकामा, जुन यस ठाउँमा जलाशयमा छुट्टिएको छ। सहि येस स्वाम्पको उचाईमा। तपाईं यसलाई N-240 सडकबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन स्यान सेबस्टियन र तार्रागोना बीचमा पुग्छ, यद्यपि मठको साथ आमने सामने हुन चार किलोमिटर लामो यात्रा गर्नु आवश्यक छ।
कुन उनको कथा? यो कहिले स्थापित भयो भनेर निश्चित रूपमा थाहा छैन, यद्यपि पहिलो दस्तावेज समाचार ११ औं शताब्दीको हो जब कर्डोबाका सेन्ट युलोगियोले यसलाई भ्रमण गरेका थिए र 848। त्यो समयमा उनी सन्त थिएनन् तर साधारण पादरी थिए र उनी जर्मन देशहरूमा गइरहेका थिए। अरागान र नवर्रेको भूमिमा उनले आफ्नो अनुभवहरूको समृद्ध वर्णन स्थानीय गुम्बामा छोडे र तीमध्ये ल्यरे पनि हुन्, जो यस समय पछि पनि उभिएका छन्।
यद्यपि उनका टिप्पणीहरू संक्षिप्त छन्, अन्य ऐतिहासिक सन्दर्भहरूमा थपिए पनि, त्यस समयको गुम्बाको छवि जोड्न सकिन्छ: महान समुदाय र एक महान धनी पुस्तकालय। भौगोलिक स्थानले ईतिहास र मुस्लिम बीचको इतिहासलाई चिन्ह लगाएको छ। १० औं शताब्दीमा बारम्बार आक्रमणहरू भएका थिए त्यसैले जीवन वरिपरि जटिल थियो राजतन्त्र लेयरमा शरण लिन समाप्त भयो र पाम्प्लोनाका विशपहरू गुम्बाका भिक्षुहरूमध्येबाट छानिएका थिए।
यस समयसम्म, कुनै श doubt्का बिना, लिवर मठ नवारमा पहिले नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
Leyre को मठ भ्रमण गर्नुहोस्
वास्तुशिल्प लगाउने प्रभावशाली छ। त्यहाँ दुईवटा मठहरू छन्, एउटा पुरानो र एक नयाँ।। सब भन्दा पुरानो मितिहरू नवौं शताब्दीको हो र यो शताब्दीबाट एक सय प्रतिशत नभए पनि यसमा आदिम वास्तुकलाको चिह्नहरू देख्न सकिन्छ। यी पुराना भवनहरू मध्येको यो हो कि आधुनिक समयमा होटल उद्योग निर्माण गरिएको थियो।
यहाँ भ्रमण सुरु गर्न, हामी पहिले रोक्न सक्छौं एपीएस को प्लाजा। यस बिन्दुबाट तपाईले चर्च र टावरको तीनवटा बाहिरी एपीएस, तीन ठोस देखिने ढु stone्गा खण्ड र साँघुरो झ्याल देख्न सक्नुहुन्छ। बाँयामा छ नयाँ मठ जुन १ XNUMX औं शताब्दीको हो र दायाँ नवौं र ११ औं शताब्दीको पुरानो मठ, आज आतिथ्य उद्योग।
यदि तपाई क्रिप्ट जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले मध्ययुगीन मठमा प्रवेश गर्नु पर्छ ढोकाबाट जुन लबीमा पुग्दछ र एपीएसको नजिकै छ। क्रिप्ट रोमान्सक हो र यो संकीर्ण staggered र सुपरइम्पोज्ड मेहराबहरु, धेरै मजबूत छ। ठूला ठूला ठूला ठूला ठूलाको साथ मोटो, असभ्य स्तम्भहरू। ढु st्गाका ग्रोभ जसले भोल्ट नाभाहरूलाई समर्थन गर्दछ। क्राइप्ट वर्ष १० year मा अभिषेक गरिएको थियो7.
क्रिप्टलाई पास गर्नु भनेको कल हो सान विरोला सुरुnel जुन त्यस समयमा गुम्बाको बाहिरी भागको सामना गर्नुपरेको आज भन्दा पनि खराब नै छ जुन ढोका छ, जबकि बन्द छ, नयाँ मठ संग संचार। यस सुरुnelको नामकरण गरिएको छ किनकि अन्तमा १ Vir औं शताब्दीको सान विरिलाको छवि छ, लियरको मठाधीश, एक भिक्षु जसले स्वर्गमा अनन्त जीवनको बारेमा सोच्दछ, वा शंकाले उनलाई ल्याएको शंकाको बारेमा।
अहिले, चर्चको तीन भाग छन्। हो रोमान्सक हेडबोर्ड संकुचित aisles र एक देहाती सजावटी शैली को साथ crypt रूपमा समान अवधि। त्यसो हो उत्कृष्ट शिपरोमान्सक पनि, गोथिक र रोमेनेस्क स्तम्भहरूको साथ। योसँग दुई विन्डोज छन्।
र अन्तमा त्यहाँ छ गोथिक भल्ट त्यो एकल आर्चको साथ नाभिको १ meter मिटर चौड़ाई कभर गर्दछ। उनीहरू भन्छन कि यो नाभराको सबैभन्दा सुन्दर वारहेडहरू मध्ये एक हो र मध्य भागमा सान्ता मारिया डे लाइरेको चित्रले प्रभुत्व जमाएको छ, जुन ख्रीष्टको नक्सा हो र उत्तरमा राजाहरूको पन्थोन हो।
El रोयल पन्थ्यान यो एबी चर्चको नेभको मध्य भागमा आर्कोसोलियममा अवस्थित छ। त्यहाँ लोभ र कांस्य मसीह छ जुन नवारिस चेनको साथ छ र एकदम चतुर छातीमा, नव-गोथिक शैलीमा, ओकले बनेको छ, जसका अवशेषहरू छन्। नाभ्रेका पहिलो राजाहरू काँसाको पट्टिकामा उनको नामको साथ। यति धेरै पुरुषहरू मध्ये त्यहाँ सात रानीहरू पनि गाडिएका छन्।
थप जानकारीको रूपमा मैले त्यसलाई हाइलाइट गरें प्रत्येक वर्ष नवर्राका राजाहरू र रानीहरूलाई श्रद्धाञ्जलि दिइन्छ। यस वर्ष यो जुलाई १ थियो र त्यहाँ एक अंग वाचन, जन, नाच र मठ बगैंचामा एक लोकप्रिय अपेरिटिफ छ।
यस अ of्गको संगीत सुन्दर छ, इन्स्ट्रुमेन्ट २० औं शताब्दीको s० को दशकको हो र यो नाभ्रे अर्गानिकको धेरै उत्कृष्ट कार्य हो। Leyre को मठ को अर्को विशेषता यो हो ग्रेगोरियन मन्त्र। यी गीतहरू वास्तवमा al, XNUMXth र XNUMXth औं शताब्दीका भोक संगीतको रचनाको समूह हो र चर्चको विश्वासको अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ। यहाँ सबै liturgical सेवाहरु मा सुन्न सकिन्छMatins बाहेक।
एउटा सिँढी क्राइप्टबाट जान्छ जुन पुरानो मठको आँगनतर्फ जान्छ जहाँ वास्तुगत र कलात्मक यात्रा जारी छ। म तिमीलाई यहाँ छोडछु Leyre को गुम्बामा पर्यटक भ्रमण बारे उपयोगी जानकारी:
खुल्ने समय: यस नोभेम्बरमा बिहान १०::10० देखि साँझ। सम्म खोल्नुहोस्। नि: शुल्क भ्रमणहरू 30::6० सम्म हुन्।
आरक्षण द्वारा भ्रमणहरू दस वयस्कहरूको समूहका लागि सोमबारदेखि शुक्रवार सम्म हुन्। शनिबार ११::11०, १२::30०, १:12:०० र १:30:०० छन्। आइतवार र छुट्टीहरू १२::16०, १:00::17०, १:00:०० र १:12:००।
यो प्रत्येक दिन खुल्छ डिसेम्बर २ 24 बाहेक, जनवरी २,, १ र जनवरी in मा।
नि: शुल्क यात्राको लागत प्रति वयस्क 3.२० युरो र निर्देशित भ्रमण 20..3० युरो छ।
अन्तमा यस बारे केही जानकारी Leyre अतिथिगृह।
यो १ 1976 XNUMX मा निर्माण भएको हो र दुई तारा हो।
योसँग rooms२ कोठा छ: १ double डबल्स, १२ एकल, १ ट्रिपल र तीन चौगुना। सबैको केन्द्रीय हीटिंग, वाइफाइ, पूरा बाथरूम छ।
त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, बार, धूम्रपान नहुने कोठा, एलिभेटर, उपहार पसल छ। पार्कि free नि: शुल्क छ।
Via बायजे मार्फत!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » मठ Leyre को
विदेशमा रोमि:: कहाँ, कहिले र कुन मूल्यमा
एक आश्चर्यजनक क्रिसमस को लागी एक यात्रा खोज्नुहोस्